2022 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် အကောင်းဆုံး UK အွန်လိုင်း ကုန်သွယ်မှုအကောင့် 🥇 အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ကုန်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးယူကေကုန်သွယ်မှုအကောင့် - လမ်းညွှန်အပြည့်အစုံ!
ကျနော်တို့ သုံးသပ်ပြီးပါပြီ။ 2022 ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး UK ကုန်သွယ်မှုအကောင့်များ.
အရောင်းအ၀ယ်အကောင့်တစ်ခုတွင် သင့်အား ငွေထည့်ဝင်ခွင့်ပြုပါမည်။ ထိန်းချုပ်ထားသော UK ပွဲစားခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ငွေကြေးတူရိယာများကို ဝယ်ယူရောင်းချပါ။ အရောင်းအ၀ယ်အကောင့်များကိုကမ်းလှမ်းသည့်အွန်လိုင်းနေရာများတွင်ပွဲစားရာနှင့်ချီရှိသောကြောင့်မည်သည့်ပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်ရမည်ကိုသိခြင်းသည်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 2022 ခုနှစ်တွင် ကုန်သည်များအတွက် အကောင်းဆုံး UK ကုန်သွယ်မှုအကောင့်များဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွင်းကျကျလမ်းညွှန်ကို ဖတ်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ စျေးကွက်ထဲတွင် လက်ရှိအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးသူများသို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်သွယ်မှုအကောင့်များ အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ အသုံးဝင်သော အကြံပြုချက်အချို့ကိုလည်း သင့်အားပေးပါသည်။
မှတ်စု: အခကြေးငွေများ၊ ကော်မရှင်များ၊ ပေးချေမှုများ၊ နှင့် leverage ကဲ့သို့သော မက်ထရစ်များသည် ရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အရေးကြီးသောအရာများဖြစ်သော်လည်း၊ UK ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ပလက်ဖောင်းကို ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း သေချာစေရမည်။ ၎င်းသည် သင့်ရန်ပုံငွေများကို အချိန်တိုင်း ဘေးကင်းကြောင်း သေချာစေမည်ဖြစ်သည်။
အရောင်းအ၀ယ်အကောင့်များသည် သင့်အိမ်တွင် သက်တောင့်သက်သာရှိသော ငွေကြေးကိရိယာများကို ဝယ်ယူရောင်းချခွင့်ပြုသည့် အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများမျှသာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အား ရိုးရာပွဲစားကုမ္ပဏီများက ကမ်းလှမ်းကာ ပံ့ပိုးပေးထားပြီး အများစုကို ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်အာဏာပိုင် ကဲ့သို့သော အဓိကလိုင်စင်အဖွဲ့များမှ စီမံကွပ်ကဲခြင်းဖြစ်သည် (FCA) အခြားကိစ္စများတွင်၊ ပွဲစားသည် ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာအားထိန်းကျောင်းသူများနှင့် လိုင်စင်ကိုင်ထားနိုင်သည်။ ASIC သြစတြေးလျသို့မဟုတ် CySEC ဆိုက်ပရပ်စ်၏။
မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုအွန်လိုင်းပွဲစားတစ် ဦး နှင့်ကုန်သွယ်ရန်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်ရွေးချယ်သည့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အဓိကအားဖြင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်၏အမည်အပြည့်အစုံ၊ အိမ်လိပ်စာနှင့်မွေးသက္ကရာဇ်စသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ငွေခဝါချခြင်းတိုက်ဖျက်ရေးစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်ပွဲစားများသည်သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။
၎င်းသည် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကဲ့သို့သော အစိုးရမှထုတ်ပေးသော ID ၏ ပံ့ပိုးမှု လိုအပ်ပါသည်။ သင်သည် ကနဦးသတ်မှတ်မှုကို ကျော်ဖြတ်ပြီးသည်နှင့်၊ ထို့နောက် သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကို ရန်ပုံငွေပေးရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် သင်သည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုအမြောက်အမြားတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီအထဲမှာတေကြ စတော့ရှယ်ယာ အစုရှယ်ယာများ၊ ကုန်စည်, ညွှန်းကိန်းအတိုးနှုန်းများ၊ ငွေချေးစာချုပ်များနှင့် cryptocurrencies များပင်။
တစ် ဦး ဖွင့်လှစ်အသုံးပြုခြင်း၏ကျယ်ပြန်အကျိုးကျေးဇူး အွန်လိုင်းကုန်သွယ် အကောင့်ဆိုတာက button ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်တာပါပဲ။ ၎င်းတွင် desktop PC များနှင့် laptop များသာမကဘဲအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုအကောင့်များတွင်မိုဘိုင်း app တစ်ခုပါရှိသည်။ သငျသညျပြောင်းရွှေ့နေစဉ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းလိုလျှင်ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သော, ဒီပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ပါတယ်။
UK Trading အကောင့်ကို အသုံးပြုခြင်း၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ
ဗြိတိန်ပွဲစားအများစုကို FCA မှထိန်းချုပ်သည်
အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုအကောင့်များအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားသည်မဟုတ် - သတိဖြင့်နင်းနယ်ကြသည်
သင် DIY အခြေခံပေါ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်
အွန်လိုင်း UK Trading အကောင့်တစ်ခုဖြင့် မည်သို့ရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်မည်နည်း။
အကယ်၍ သင်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံးဗြိတိန်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုအကောင့်များကိုရှာဖွေနေပါကအောင်မြင်မှုနှုန်း ၈၂% ရှိပြီးတစ်လအမြတ်အရောင်း ၃၅-၄၅% ကိုသင်ပိုင်ဆိုင်သည်မှာသင်သည်ရေတိုအခြေခံအားဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်ရှာနေသည်ဟုယူဆသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်သင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်။ တိုတောင်းသောစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများမှအမြတ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ အွန်လိုင်းကုန်သွယ်အကောင့်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့် လာပါသည်။ CFDs နှင့် Forex။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းနှစ်ခုကို ပိုမိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
ယူကေရှိ CFD ကုန်သွယ်မှုအကောင့်များ
စာချုပ်များအတွက်ကွဲပြားမှုများ - CFDs များအရသင့်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုမရှိပဲဘဏ္withoutာရေးတူရိယာများရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုသည်။ အဲဒီအစား, သငျသညျရိုးရိုးပိုင်ဆိုင်မှု၏အနာဂတ်တန်ဖိုးအပေါ်ခန့်မှန်းနေကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်နေ့စဉ်ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခက်ခဲသောထောင်ပေါင်းများစွာသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသင့်အားလက်လှမ်းမီစေသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်အကျိုးရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ 2021 အစောပိုင်းတွင်တန်ဖိုး ဆီ တစ်စည်လျှင် ဒေါ်လာ ၂၀ ကျော်သာရှိသော စျေးနှုန်းသည် အနိမ့်ဆုံးအသစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ လာမည့်ရက်များ သို့မဟုတ် ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း အနာဂတ်တွင် ရေနံစျေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာမည်ကို မှန်းဆလိုပါက၊ သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ 'ဝယ်ယူမှု' ကို အကောင့်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ CFD ကုန်သွယ် အကောင့်။
CFD ကိုအသုံးပြုခြင်းမရှိလျှင်ရေနံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်သင်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသိမ်းဆည်းရန်နှင့်သိုလှောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုအရာများကသင်၏ CFD ကုန်သွယ်မှုအကောင့်မှတစ်ဆင့်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည့်ရေနံမျှသာမဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, သင်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများစွာကိုဝယ်ယူရောင်းချနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်နှင့်အမျှ CFD အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုအကောင့်များသည်သင့်အားသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးကိုပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏အကောင့်တွင်သင်ထက်ပိုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင့်အနေဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတိုတောင်းသောရောင်းရန်လည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သွားနေသောပိုင်ဆိုင်မှု၏တန်ဖိုးကိုခန့်မှန်းနိုင်သည် ဆင်း.
UK ရှိ Forex Trading အကောင့်များ
အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုအကောင့်အများစုသည်သင့်အားပေါင်ပေါင်းထရီလီယံများစွာရှိသည်ဟုခန့်မှန်းထားသည့် Forex အာကာသသို့လည်းဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။ သတိမထားမိသူများအတွက်၊ ဤအထူးပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားသည်ငွေကြေး ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အယူအဆသည်“ Forex pair” ဟုသိကြသည့်ငွေကြေးနှစ်ခုကြားတွင်သေးငယ်သောဈေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုမှအမြတ်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဥပမာ USD / USD အကြားငွေလဲနှုန်းသည် ၁.၁၀ ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါစို့။ ဆိုလိုသည်မှာယူရိုတိုင်းအတွက်ဒေါ်လာ ၁.၁၀ ရရှိသည်။ ယူရို၏စျေးနှုန်းသည် USD ထက်မြင့်တက်မည်ဟုသင်ထင်ပါကသင်သည် '၀ ယ်ယူအမိန့်' ကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ဆန့်ကျင်ဘက်ဟုသင်ထင်ပါကတနည်းအားဖြင့် 'ရောင်းရန်အမိန့်' ကိုနေရာချလိမ့်မည်။
အရေးကြီးတာက ကြားထဲမှာ ငွေလဲနှုန်း EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ - နှင့် အခြား Forex အတွဲများစွာတို့သည် ဒုတိယအားဖြင့် စက္ကန့်အလိုက် ရွေ့လျားသည်။ ဒါကြောင့် နေ့စဥ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားဖို့ စီစဉ်နေသူတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ forex space သည် 24/7 အခြေခံပေါ်တွင်လည်ပတ်သောကြောင့်စျေးကွက်နာရီများကိုစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲသင်ငွေကြေးများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်သည်။
Forex trading အတွဲများအားအဓိကအမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားသည်။
အဓိကအတွဲများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်အများဆုံးငွေကြေးများဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အလွန်တင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုများအပြင်နေ့ရောညပါပါအာမခံနိုင်သည့်အကျိုးအမြတ်ကိုခံစားရမည်ဟုဆိုလိုသည်။
အဓိကအတွဲများ၏အဓိကလက္ခဏာမှာ၎င်းတို့သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုအမြဲတမ်းဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအတွဲကိုဖွဲ့စည်းထားသောအခြားငွေကြေးသည်အားကြီးသောငွေကြေးဖြစ်လိမ့်မည်။ ပေါင်စတာလင် (GBP)၊ ယူရို (ယူရို) နှင့်သြစတြေးလျဒေါ်လာတို့၏သြစတြေးလျတို့ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။
အသေးစား Forex အတွဲများတွင်အားကောင်းသောငွေကြေးနှစ်ခုလည်းရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုထည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်သည်အရွယ်မရောက်သေးသူများကိုအရောင်းအဝယ်ပြုသည့်အခါယှဉ်ပြိုင်မှုပြန့်ပွားမှုမှသင်အကျိုးရနိုင်သော်လည်း၊ ထို့အပြင်ငွေဖြစ်လွယ်မှုသည်စွမ်းအားရှိသော်လည်းအဓိကအတွဲများကဲ့သို့မခိုင်မာပါ။
လူကြိုက်များသောအသေးစား Forex အတွဲများမှာ
အကယ်၍ သင်သည်ထွန်းသစ်စငွေကြေးများနှင့်ထိတွေ့လိုလျှင်သင်၏ Forex trading account သည်ထူးခြားသော forex အတွဲများရှိမရှိစူးစမ်းလိုပေမည်။ တစ်ခုချင်းစီသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်အတူတူရကီသို့မဟုတ်ဘရာဇီးကဲ့သို့သောစီးပွားရေးမှထွက်ပေါ်လာသောငွေကြေးမှပါဝင်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များသည်လက်လီအကောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်နေ့စဉ်ကုန်သည်များဖြစ်လျှင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုမိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ဝယ်ယူရန်နှင့်ရောင်းချရန်ရှာဖွေနေပါကလက်လီရောင်းချသူ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတံခါးခုံအတွင်းကျလိမ့်မည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်လျှောက်ထားနိုင်သည့်သြဇာအကန့်အသတ်ဖြင့်သင်ကန့်သတ်ခံရမည်ကိုဆိုလိုသည်။ ESMA ပြimposed္ဌာန်းထားသည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်သင်ချည်နှောင်ထားသည့်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတစ် ဦး အနေဖြင့်လည်းကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်သြဇာသက်ရောက်မှုများနှင့်အချည်းနှီးများကိုပိုမိုအသေးစိတ်ကျစွာဖော်ပြထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကုန်သွယ်လိုသောပိုင်ဆိုင်မှုပေါ် မူတည်၍ ၂း၁ နှင့် ၃၀း၁ ကြားတွင်ရှိသည်။
တစ်ခြားသောအဆုံးတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များသည်သူတို့၏ဗြိတိန်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်မှတစ်ဆင့်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်များသောအားသြဇာပမာဏကိုအသုံးချနိုင်သည် - မကြာခဏ ၅၀၀း၁ အထိ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များသည်များသောအားဖြင့်ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်ရသည့်အခကြေးငွေများနှင့်များသောအားဖြင့်လေ့ရှိကြပြီးသူတို့၏ပမာဏသည်လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထက်များစွာကြီးမားသည်။
သင်သည်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုနယ်ပယ်အတွင်းရှိအစစ်အမှန်လောကငွေကြေးကိုရှာဖွေရန်ရှာဖွေနေပါကသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအပ်ငွေနည်းလမ်းကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အွန်လိုင်းပွဲစားအများစုသည်သင့်အားရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်စရာများကိုပေးသည်။ ဥပမာ -
ဗြိတိန်ပွဲစားနှင့်အတူအွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရန်, သင်အခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးတွင်ပွဲစားများသည်ငွေရှာရန်လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ သင်ပေးရမည့်တိကျသောအခကြေးငွေများသည်ပြtheနာပေါ် မူတည်၍ အတော်လေးကွဲပြားနိုင်သည်။
အချို့သောပွဲစားများသည်သင်ငွေသွင်းရန်သို့မဟုတ်ထုတ်ယူရန်သင်ရွေးချယ်သောအခါသင့်အားအခကြေးငွေပေးလိမ့်မည်။ သူတို့လုပ်ရင်ဒါကရာခိုင်နှုန်းအခကြေးငွေနဲ့လာမယ်ဆိုတာသေချာပေမယ့်သေချာပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ပေးသူသည်ဗီဇာငွေများအပေါ် ၂% ကောက်ခံသည်ဆိုပါစို့။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ထဲသို့£2ကိုသွင်းပါကသင်£ 1,000 ပေးရလိမ့်မည်။
အချို့ပွဲစားများသည်သင်၏ကဒ်ထဲမှပေါင် ၁,၀၂၀ ကိုယူသွားမည်ကိုဆိုလိုသည်။ တနည်းအားဖြင့်သူတို့သည်သင်၏လက်ကျန်ငွေမှနုတ်နိုင်သည်။ ဤဥပမာတွင်သင်၏ကဒ်သည်ပေါင် ၁၀၀၀ ဖြင့်ငွေဖြည့်ထားသော်လည်းကုန်သွယ်မှုလက်ကျန်ငွေပေါင် ၉၈၀ ဖြင့်စတင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်သည့်အခါတိုင်းသင့်အနေဖြင့်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်ကိုငွေပေးချေရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ပွဲစားများဟာ variable ပုံစံကိုသုံးပါတယ်။ Layman ၏စည်းမျဉ်းများအရသင်၏ကုန်သွယ်ကြေးကိုရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ဖော်ပြပြီးသင့်ကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုမြှောက်လိမ့်မည်။
ကုန်သွယ်မှုအကောင့်အကျိုးဆောင်သည် ၁% ကော်မရှင်ကိုကောက်ခံသည်
သင်တစ်ဦးအတွက် £5,000 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ ရှေ CFD
ဒီဟာပေါင် ၅၀ ပေးရမယ်
သင်၏ရွှေ CFD ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ပေါင် ၆၀၀၀ တန်သည်
ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင် ၁% တွင်သင်သည်ပေါင် ၆၀ ပေးရသည်
ထို့ကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်ကိုသင်ပေးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထိုအရာများနှင့်အတူဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောကုန်သွယ်ရေးအကောင့်အများစုသည်သင့်အားကော်မရှင်မပါဘဲကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤသည်ကသင့်အားဖြုန်းတီးနေသောအမှိုက်ပုံများကိုအခကြေးငွေများဖြင့်သက်သာစေရန်အလားအလာရှိသည်။
သင်အကောင့်ဖွင့်ထားသည့် ကုန်သွယ်မှုအကောင့် မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ 'ပုံစံဖြင့် သွယ်ဝိုက်သောအခကြေးငွေကို အမြဲပေးဆောင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ပျံ့နှံ့' ၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏“ ၀ ယ်ခြင်း” နှင့်“ ရောင်း” ခြင်းအကြားခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ Forex အရောင်းအ ၀ ယ်ကိစ္စတွင်ပြန့်ပွားမှုကို 'pips' CFD အရောင်းအဝယ်တွင်၎င်းကို“ အချက်များ” တွင်ရည်ညွှန်းသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ပြန့်ပွားမှုကိုရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်တွက်ချက်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင့်အားသင်မည်မျှပေးဆပ်သည်ကိုမျက်စိဖြင့်မြင်စေလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်ဟာ CFDs stock အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါစို့။ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းစျေးနှုန်းအကြားခြားနားချက်မှာ ၀.၅% ဖြစ်ပြီးဆိုလိုသည်မှာသင်သည် ၀.၅% နှင့်ညီမျှသောသင်ပြန့်ပွားမှုကိုသင်ပေးနေသည်။
ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုစတင်သောအခါ၊ အရင်းကျေရန်အနည်းဆုံး 0.5% အမြတ်ရရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပြန့်နှံ့လေလေ အမြတ်ရလေလေ စိန်ခေါ်လေလေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် တင်းကျပ်သောပျံ့နှံ့မှုများပါရှိသော ကုန်သွယ်မှုအကောင့်များကိုသာ အကြံပြုပါသည်။
အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မမျှော်လင့်ဘဲသင်၏လက်လီရောင်း ၀ ယ်သူအဖြစ်မှတ်ယူလိမ့်မည်။ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်သင်၏အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုတင်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အတန်းကိုသက်သေပြရန်လိုအပ်သည်။
ယူကေရှိလက်လီဖောက်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥရောပလုံခြုံရေးနှင့်စျေးကွက်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ (ESMA) မှချမှတ်ထားသောသြဇာသက်ရောက်မှုကိုသင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အဓိက Forex အတွဲများ 30: 1
အသေးစား / ထူးခြားဆန်းပြားသော Forex အတွဲများ၊ ရွှေနှင့်အဓိကညွှန်းကိန်း CFDs: 20: 1
အခြား CFD ကုန်ပစ္စည်းများ 10: 1
CFD ရှယ်ယာများနှင့်ရှယ်ယာ: 5: 1
Cryptocurrencies- 2: 1
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအရသင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကန့်သတ်ချက်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစား၏အန္တရာယ်ကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ မတည်ငြိမ်မှုယေဘုယျအားဖြင့်နိမ့်သောကြောင့်, ဥပမာ, အဓိက Forex အားလုံးအတွက်အမြင့်ဆုံးကန့်သတ်နှင့်အတူလာ။ ၏အခြားအဆုံးမှာ Bitcoin နှင့်တူသော cryptocurrencies Ethereum ၎င်းတို့သည်အလွန်ခန့်မှန်းတွက်ဆနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သောကြောင့် ၂း၁ ကိုသာခွင့်ပြုပါ။
ထို့ကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ အပြင်သင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်သည့်ပစ္စည်းအမြောက်အများကိုသင်သိပြီ ဖြစ်၍ သင်အသုံးပြုလိုသောတိကျသောပလက်ဖောင်းကိုစတင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
တစ်ချက်တွင်၊ ယူအက်စ်ဈေးကွက်တွင်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နေသည့် FCA ရာနှင့်ချီသော FCA ပွဲစားများသည်စာသားများရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ၎င်းသည်မည်သူနှင့်မည်သူ ၀ င်ရောက်ရမည်ကိုသိရန်ခက်ခဲစေသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဗြိတိန်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များကိုမည်သို့ရှာရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုဖတ်ရှုရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
သင်၏ပထမဆုံးခေါ်ဆိုမှုဆိပ်ကမ်းသည်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ပံ့ပိုးသူအားစည်းမျဉ်းများသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ရန်ပုံငွေသည်အမြဲတမ်းလုံခြုံမှုရှိစေရန်သေချာစေသည်။ ထို့အပြင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည့်ပွဲစားများသည်ဖောက်သည်များ၏ရန်ပုံငွေများကိုဘဏ်အကောင့်များ၌ထားရှိရန်လိုအပ်သည်။
ပွဲစားမတည်ရှိလျှင်၎င်းသည်၎င်းသည်အကာအကွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ကဗြိတိန်တွင်ရောက်နေလျှင် FCA စည်းမျဉ်းခံပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် CySEC နှင့် ASIC တို့၏သဘောသဘာဝသည်ကမ္ဘာအနှံ့လေးစားခံရသည့်လိုင်စင်အဖွဲ့များဖြစ်သည်။
သငျသညျအစစ်အမှန်ကမ္ဘာပေါင်နှင့် pence လဲလှယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအရောင်းအဝယ်ဖြစ်သွားတော့, ဒါကြောင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုထောက်ခံကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ထဲသို့ငွေရရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာဒက်ဘစ်သို့မဟုတ်အကြွေးဝယ်ကဒ်ကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုချက်ချင်းအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။
အရောင်းအ၀ယ်အကောင့်အများစုကိုလည်း ဘဏ်ငွေလွှဲမှတစ်ဆင့် ငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်သည်။ ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် များစွာနှေးကွေးသော်လည်း၊ မြင့်မားသော ကန့်သတ်ချက်များမှ သင်သည် မကြာခဏ အကျိုးခံစားရပါလိမ့်မည်။ အချို့ပွဲစားများသည် PayPal နှင့် Skrill ကဲ့သို့သော e-wallet များကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်အစောပိုင်းတွင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်းအခကြေးငွေများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သိုက်ကြေးနှင့်စတင်ပြီးသင်ပြုလုပ်သောကုန်သွယ်မှုအတွက်ကော်မရှင်အားလုံးမှစတင်သည်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများ၌သင်ငွေပေးချေရန်လိုအပ်မည့်အရာများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ All-in-all သည်အခမဲ့ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ထုတ်ယူခြင်းများ၊ တင်းကျပ်စွာပြန့်ပွားခြင်းနှင့်ကော်မရှင်မှ ၀ န်ဆောင်မှုများလုံးဝမရှိသောကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များကိုသာအာရုံစိုက်ပါ။
ထို့နောက်ပွဲစားကမည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားကိုသင်လေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာပလက်ဖောင်းသည်အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းများကိုကမ်းလှမ်းသည်ဆိုပါစို့။ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကငွေကြေးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရောင်းဝယ်ချင်တယ်၊ အဲဒါကိုမထောက်ပံ့ဘူးဆိုရင်သင်စိတ်ပျက်သွားမှာပါ။ ထို့ကြောင့်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်တစ်ခုမဖွင့်မှီပွဲစား၏ကုန်ပစ္စည်းတူရိယာစာရင်းကိုရှာဖွေပါ။
ထို့ကြောင့်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုပွဲစားတစ် ဦး နှင့်သင်ဖွင့်လှစ်လိုသည်၊ အလားတူပင်၊ အခြေခံကျသောသုတေသနသည်အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း၌လည်းအရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာဖြစ်ရပ်များကိုရည်ညွှန်းသည်။ သတင်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏အနာဂတ်စျေးနှုန်းကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုလောကတွင်အကြွင်းမဲ့လေ့လာသူဖြစ်ပါက၊ ပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကမ်းလှမ်းသောပွဲစားတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပြင်ပအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုစရာမလိုဘဲအွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာသင်၏စွမ်းရည်နှင့်ဗဟုသုတကိုတိုးတက်စေရန်သင့်အားခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဗီဒီယိုများ၊ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်များ၊ ကုန်သွယ်ရေးအတွေးအခေါ်များ၊
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖောက်သည်အထောက်အပံ့ကိုမမေ့ပါနှင့် - ပြီးနောက်၊ သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်တွင်သင်အကူအညီလိုအပ်သည့်အချိန်ရောက်လာနိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းများတစ်လျှောက်တွင်ဖောက်သည်များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကို ၂၄/၇ ကိုပံ့ပိုးပေးသည့်ပွဲစားများနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်ချက်တင်စကားပြောခြင်းသည်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်သည်၊ သို့သော်အချို့သောကုန်သည်များသည်တယ်လီဖုန်းအထောက်အပံ့သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပိုနှစ်သက်ကြသည်။
ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်တခုဖွင့်နည်း - အဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်
ထို့ကြောင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အကိုက်ညီဆုံးသောကုန်သွယ်မှုအကောင့်တစ်ခုကိုသင်မည်သို့ရှာရမည်ကိုယခုသင်သိပြီ ဖြစ်၍ ယခုကျွန်ုပ်တို့ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလေ့လာသွားမည်ဖြစ်သည်။ သတင်းကောင်းမှာမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်း၊ ရန်ပုံငွေများအပ်နှံခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်အဆုံးမှအဆုံးသို့ ၁၀ မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာသည်။
အဆင့် ၁ - ယူကေကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုရွေးချယ်ပါ
အကယ်၍ ပွဲစားများကိုသင်ကိုယ်တိုင်လေ့လာရန်အချိန်မရပါက UK ကုန်သွယ်ရေးအကောင့် (၅) ခုကိုဤစာမျက်နှာ၏အောက်ဆုံးသို့စာရင်းပြုစုထားပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုအကောင့်များအားလုံးကို FCA နှင့် CySEC ကဲ့သို့သောအဆင့် ၁ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားပြီးအခကြေးငွေများသည်အလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။
အဆင့် ၂ - ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်တခုဖွင့်ပြီးအထောက်အထားကိုစစ်ဆေးပါ
သင်ရွေးချယ်ထားသောပွဲစား၏ပင်မစာမျက်နှာသို့ သွား၍ ကုန်သွယ်မှုအကောင့်အသစ်ဖွင့်ရန်ရွေးချယ်ပါ။ အွန်လိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးကဲ့သို့ပင်ပွဲစားသည်သင့်ထံမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အချို့ကောက်ယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ငွေခဝါချခြင်းဥပဒေများကိုလိုက်နာရန်ပွဲစားသည်သင်၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ အချို့ပွဲစားများကသင့်အားယင်းကိုနောင်အဆင့်၌ခွင့်ပြုသော်လည်းခွင့်ပြုချက်မပေးမီသင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ယခုဖြစ်စဉ်ကိုလမ်းထဲကနေထွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
KYC (သင်၏သုံးစွဲသူကိုသိရှိရန်) လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြီးမြောက်ရန်အတွက်သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ပေးသူအချို့သည်လတ်တလောလိပ်စာအထောက်အထားကိုတောင်းခံလိမ့်မည် - ဥပမာ utility utility bill သို့မဟုတ်ဘဏ်အကောင့်ဖော်ပြချက်။
သင်အသစ်ပြုလုပ်ထားသောကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုယခုရန်ပုံငွေထည့်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ သင်ရရှိနိုင်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းသည်သင်ရွေးချယ်သောပွဲစားအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ၎င်းတွင် debit / credit card၊ e-wallet သို့မဟုတ် bank transfer တို့ပါဝင်သည်။ ပွဲစား၏အနည်းဆုံးအပ်ငွေပမာဏကိုဖြည့်ဆည်းရန်သေချာပါစေ။
ပြီးနောက်၊ သင်သည်အမှာစာတစ်ခုကိုချမှတ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်ယခင်ကမရောင်းခဲ့ဖူးပါက၎င်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ။
မှာယူမှု / ရောင်းရန်: ဤအချက်သည်သင်စျေးကွက်များသွားလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်သောလမ်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးတိုးလာလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်ပါက '၀ ယ်ယူ' အမိန့်ကိုချထားပါ။ တနည်းအားဖြင့် အကယ်၍ သင်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုး၏တန်ဖိုးကျလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်လျှင် 'ရောင်း' ရန်အမိန့်ပေးခြင်းဖြင့်၎င်းကိုအတိုချုံးနိုင်သည်။
လောင်းကြေး: သင်၏ကုန်သွယ်မှုတွင်သင်လောင်းလိုသောပမာဏကိုရည်ညွှန်းသည်။ ပေါင်နှင့် pence ၌ဤထည့်ပါ။
စျေး / ကန့်သတ်ချက်အမိန့်: အကယ်၍ သင်ရွေးချယ်ထားသောပိုင်ဆိုင်မှုတွင်နောက်ထပ်ရရှိနိုင်သည့်စျေးနှုန်းကိုသင်ကျေပွန်လျှင်ပျော်ရွှင်မှုရှိပါကအမှာစာဘောက်စ်ကို 'စျေးကွက်' အမိန့်အဖြစ်ထားပါ။ စျေးကွက်ထဲ ၀ င်ရန်အတွက်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ရန်သင်ရွေးချယ်လိုပါက၎င်းကို“ ကန့်သတ်ချက်” အမိန့်အဖြစ်ပြောင်းပါ။
သြဇာ: ဤသည်မှာသင်သည်သင်၏အမှာစာကိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်လိမ့်မည်။ မမေ့ပါနှင့်၊ သင်၏ကန့်သတ်ချက်များကိုသင်ရောင်း ၀ ယ်သည့်ပစ္စည်းအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
အမြတ်အစွန်းယူပါ - ၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသတ်မှတ်ထားသောဈေးနှုန်းတစ်ခုသို့ရောက်သောအခါသင်၏အမြတ်အစွန်းကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ဆို့ရန်ခွင့်ပြုသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ကုန်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးယူကေကုန်သွယ်ရေး - ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုများ
သင်သည်လက်ငင်းပိုင်ဆိုင်မှုများကိုယခုပင်စတင် ၀ ယ်ယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုလျှင်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောပွဲစားတစ် ဦး ကိုသင်မတွေ့ရပါက ၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ထိပ်တန်းဗြိတိန်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုအကောင့် ၅ ခုကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ပွဲစားတစ် ဦး စီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အခကြေးငွေနည်းခြင်း၊ တင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှု၊ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများနှင့်ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုတို့ပါဝင်သည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေရာသည်ရာနှင့်ချီသောအွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုအကောင့်များ၏နေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသင့်အိမ်၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုမှသည်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်အလွန်လွယ်ကူစေသည်။ သို့သော် - ကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ပွဲစားနှစ်ယောက်လည်းအတူတူပင်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလိုအပ်ချက်များအတွက်မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသိရန်ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ပံ့ပိုးသူကိုရွေးချယ်ရာတွင်သင်သတိပြုရန်လိုအပ်သည့်အချက်များအချို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်တွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ကော်မရှင်အနိမ့်သို့မဟုတ်သုည၊ တင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုများ၊ နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ၊ သုတေသနကိရိယာများကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုများတို့ပါဝင်သည်။ သင်၏အဓိကသုတေသနကိုလုပ်ရန်အချိန်မရှိသောသင်တို့အတွက် ၂၀၂၀ တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းဗြိတိန်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်များကိုလည်းအရေးကြီးသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်သင်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ငွေထုတ်ယူခြင်းကို debit သို့မဟုတ် credit card, bank transfer, e-wall တို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ ဗြိတိန်ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်အများစုကသင့်ကိုသြဇာသက်ရောက်စေတယ်။ သို့သော် ESMA စည်းမျဉ်းများအရသင်မည်မျှသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုကန့်သတ်ထားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်ကုန်သွယ်မှုရှိသည့်ပစ္စည်းပေါ် မူတည်၍ ၂း၁ မှ ၃၀း၁ အထိကွဲပြားသည်။
သင်၏အကောင့်ဖွင့်ချိန်တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်သင်£ 50 နှင့်£ 150 တွင်ငွေသွင်းရန်လိုအပ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏသည်သင်ရွေးချယ်ထားသောပွဲစားအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။
ယူကေရှိကုန်သွယ်မှုအကောင့်အများစုကို FCA မှထိန်းချုပ်သည်။ အခြားထင်ရှားသောလိုင်စင်အဖွဲ့များတွင် ASIC, CySEC နှင့် MAS တို့ပါဝင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်အများစုက CFD ထုတ်ကုန်တွေကိုအထောက်အပံ့ပေးတာကြောင့်သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုတိုတောင်းဖို့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိလိမ့်မယ်။
သင်သည် CFDs ပုံစံဖြင့်အစုရှယ်ယာများနှင့်အစုရှယ်ယာများကိုကမ်းလှမ်းသောကုန်သွယ်မှုအကောင့်တစ်ခုကိုအသုံးပြုနေပါကသင်ခွဲဝေခွင့်ကိုခွင့်မပြုပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ကပိုင်ဆိုင်မှုကိုမပိုင်ဘူး။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်ပြီးပါကခွဲဝေမှုဖြစ်ပါကရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုအကောင့်ကိုစတော့အိတ်ချိန်းတစ်ခုဖြင့်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။
ကော်မရှင် - အခမဲ့ကုန်သွယ်မှုအကောင့်သည်အမှန်တကယ်အခမဲ့ဖြစ်ပါသလား။